Ubudala bomntwana ukusuka kwiinyanga ezine ukuya kunyaka owodwa kuthathwa njengengumntwana. Ngeli xesha kukho uphuhliso olukhawulezayo lwentsana. Ngokulinganayo, ukuphefumula, ukugaya ukutya, i-cardiovascular and nervous systems iguqula. Ngokukhawuleza ukukhula kunye nomsebenzi womntwana. Ulusu lomntwana kwasebuntwaneni lushintsha ngokukhawuleza. Unomnxeba onqamlekileyo womzimba emzimbeni wakhe kwaye ngokukodwa ebusweni bakhe.
Kodwa ngelixa ulusu luhlala luhlala luthando kwaye lukhuseleka lula. Kudinga unyango olunyameko kunye nokunyamekela rhoqo ngohlobo oluthile lokusila. Izenzo zokuzibulala zihlukile, kodwa oko ukhethayo, siza kuthetha malunga nento ethi "Ukucola ukucocela iintsana".
Inkqubo ye-muscular ngeli xesha liphuhlisa kakhulu, kwaye ngeenyanga ezintandathu umntwana angakwazi ukuhlala eyedwa. Ubeka intloko yakhe kakuhle. Kwaye ngeenyanga ezisibhozo, umntwana uzama ukuvuka ngokwabo kwaye akhiqize ukuhamba komzimba ngaphandle kokuncediswa ngaphandle. Kulo nyaka (i-thoracic) kwaye kuyimfuneko ukuqala ukuqeqeshwa okusemgangathweni okulula, ukunceda umntwana akhulise kwaye anciphise izitho, ngenkathi elele phantsi, ehleli kunye nokuma, ukwenza imithambeka njalonjalo, kunye nokuvelisa ezinye izinto zokuhlalisa. Ezi nkqubo ziya kunceda ekuphuhliseni kakuhle izicubu ze-musculoskelet of the baby, ukuqinisa impilo yakhe. Ukuzivocavoca umzimba kunye nokunyanzela umntwana kuya kunceda ukusekela umzimba wakhe kakuhle, ukuhlakulela umzilo ozinzileyo kwiindidi ezahlukahlukeneyo ze-hypothermia kunye nezifo, impembelelo yendalo yangaphandle. Ngenxa yoko, umntwana uya kwomelela kwaye aphile. Ukususela ebusaneni kuyimfuneko ukuqhubeka nokuhamba rhoqo nomntwana evulekile. Ngethuba le mizuzu ingathabatha ukusuka kwisiqingatha seyure ukuya kwiiyure ezintathu ngosuku. Kuhle kakhulu, ukuba i-nap ntambama yomntwana iya kubanjwa evulekile. Ehlobo, phantse usuku lonke, umntwana kufuneka abe emoyeni, athathe umoya kunye nokuhlamba kwelanga. Ngexesha elifanayo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuze kuqinisekiswe ukuba umntwana akafumani umthamo ophezulu welanga. Ukwenza oku, intloko yomntwana kufuneka ikhunjiswe ngesikhonkco okanye inqatshulwa, kwaye ngosuku olukhanyayo, zama ukuqinisekisa ukuba umntwana uphantsi komthunzi wemithi okanye emthunzini wezakhiwo kunye nezinye izakhiwo. Ukuphuhliswa kakuhle kwazo zonke iinkqubo kunye nezitho kumntwana, ukuqiniswa kwezixhobo zesikhombisi, kuyimfuneko ukuqhuba i-gymnastics yemihla ngemihla kunye nokuhlalisa umntwana.
I-Gymnastics kunye nokuhlambalaza iintsana
Ukuhlambalaza iintsana kubandakanya ukutshiza nokuxubha. Xa uqala ukusilalisa, kuyimfuneko, okokuqala, ukuhlamba izandla kakuhle, ukwenzela ukuba kwinkqubo ayifaki kwibala elincinci lentsana eyahlukeneyo ye-microbes, i-bacteria kunye nentsi. Ukufeza i-massage kunye ne-gymnastics yintsana kuyimfuneko ukubeka etafileni, kuqala kwengubo okanye i-diaper ixoxwe ngamaxesha amaninzi, okanye kwi-sofa okanye kwibhedi ene-surface eqinile. Ukusetyenziswa nganye okanye ukuhlalisa umzimba kufuneka kuphindwe kabini kwimizuzu emihlanu. Ubungakanani bemizimba yomsebenzi akufanele ukuba qalise ngaphezu kwemizuzu eyi-10. Njengoko umntwana ekhula, inani lokuzivocavoca kunye nobude be-gymnastics kunye nosizi luya kwanda kancane. I-Gymnastics ne-massage inokunye enye phakathi okanye enye enye emini emini: ekuhlanjeni kwantambama, kwi-gymnastics okanye kusihlwa. Kukulungele ukuhlalisa ebusuku, kuba ixhamla ngomzimba womntwana kwaye ikhuthaza ubuthongo obunempilo nobunzima. Ngethuba lokuxilisa, ukujikeleza kwegazi kuphucula, kwaye ulusu kunye nezihlunu zomzimba womntwana ziba nzima kakhulu, ziguquguquke kwaye zenzeke. Emva kokuxilisa okanye ukuzivocavoca, umntwana angadliwa kuphela emva kwemizuzu engamashumi amathathu ukuya kwamashumi amane. Ngoku masifunde ukuba yeyiphi indlela yokuzivocavoca enokuyenza kunye neentsana kunye nokuba yintoni impembelelo emzimbeni wabantwana. I-Gymnastics kufuneka ibandakanye ukuzivocavoca ukuphucula nokuqinisa imisipha yangemuva, imisipha yezandla, imilenze, izihlunu ze-trunk nesisu.
Umntwana ubekwe kwicala lakhe lokunene kwaye, ephethe ngesandla esisodwa, kunye nomnxeba wesinye isandla esenza ukunyakaza kwesantya ukusuka phezulu ukuya phezulu. Lo msebenzi ukhula kakuhle kwaye uqinisa imisipha yomva.
Beka umntwana kwisisu sakho. Mthabathe ngemilenze uze uphakamise umzimba ongaphantsi kwetafile. Ngelo xesha, umntwana kufuneka achukumise ubuso betafile ngezandla zakhe aze aqhubeke phambili ezandleni zakhe. Lo msebenzi uqinisa ngokufanayo imisipha yeengalo kunye nokubuya. Inokuqhutyelwa kunye nabantwana abaye bakwazi ukugxila kwizandla ngeli xesha.
Beka umntwana kwisisu sakho. Mthabathe ngengxenye ephantsi yomzimba wakhe, ucinezele imbongolo yakhe esifubeni sakhe. Umntwana ngexesha elifanayo uvela ezandleni zakhe aze enze ukunyakaza ukumbamba okanye ukuhambisa amathoyizi asele tafile. Lo msebenzi uqinisa imisipha yesiqu. Kungenziwa kuphela ngumntwana oye wafunda ukuthabatha amathoyizi kunye nezinye izinto.
Lo msebenzi uqhutyelwa ngokufanayo ukuze usebenzise 4, kunye nomlinganiselo owodwa wokuguqulwa kwemilenze ngexesha elifanayo, kwaye kungenjalo. Lo msebenzi uqhubeka kwaye uqinisa imisipha yemilenze nesisu.
Beka umntwana emva. Mthabathe ngamathanga kwaye uncede ngokukhawuleza uhlale phantsi. Lo msebenzi uqhubeka kwaye uqinisa imisipha yomzimba. Ingenziwa ngumntwana osele ezama ukuhlala phantsi.
Beka umntwana kwisisu sakho. Yenza izandla phantsi kwayo uze uphakamise umntwana phezu kwetafile. Isandla esinye simele sibambe umntwana kwindawo yesifuba, kwaye esinye isandla kufuneka sigcinwe kwiinyawo zakhe kumgangatho we-ankle. Xa lo msebenzi uyenziwa, umntwana uya kuzimela ngokuzimeleyo ukugcina intloko yakhe kwindawo ephilileyo, intamo yakhe kunye nezihlunu ze-trunk ziya kuba nzima. Lo mzekelo unceda ukuqinisa ezi ntlungu.
Lo msebenzi ufana nomsebenzi wesi-7, kunye nomlinganiselo ophela wokuba yena ubambelele entanyeni ecetywayo kuye, kungekhona ngezandla zomntu omdala. Lo msebenzi uza kunceda ekuphuhliseni nasekuqiniseni izihlunu zezandla kunye nesisu, kodwa unokwenziwa ngumntwana owaziyo ukuhlala yedwa.
Beka umntwana kwisisu sakho. Mthabatha ngesandla. Ukwahlukanisa iingalo zomntwana ngezindlela ezahlukeneyo, ukuphakamisa inxalenye engaphezulu kwesaziso sakhe phezu kwetafile. Lo msebenzi uqhubeka kwaye uqinisa imisipha yomqolo, intamo kunye neengalo. Unako ukwenza umntwana owaziyo ukubamba intloko yakhe.
Njengoko kuchazwe ngentla, ukuxilisa iintsana kulungelelanisa ukuphuhliswa kwazo zonke izitho zeengane kunye nokuqiniswa kwazo. Ngokuqhubela rhoqo ukusilalisa kumntwana isistim kunye ne-muscular system yenziwe ngokufanelekileyo. Ukongeza, ukusilalisa kunceda ukuphucula umjikelezo wegazi nokukhawuleza inkqubo yokuxilongwa kwimizimba eyenziwa emzimbeni womntwana. Iimisipha kunye namalungu omntwana ziba ziguquguquke kwaye zivelise. Amanyathelo okulungiselela ngaphambi kokuba i-massage iqheleke. Ngaphambi kokuba uqale ukuxubusha umntwana, kufuneka uhlambe izandla zakho ngesepha bese ubomisa ngelawula. Emva koko mbeke umntwana etafileni okanye embhedeni aze aveze loo malungu omzimba apho i-massage iya kwenziwa. Njengoko kunye ne-gymnastics, kufuneka ubeke iliso lokushisa ekamelweni, ngaphambi kokuvusa igumbi. Emva koko, umzimba womntwana kunye nezandla zomaster kufuneka kusetyenziswe ukhilimu okanye i-talc, kuxhomekeke kwilungu lolusu lomntwana. Kwaye ungaqala ukuhlaziya. Ukubetha nokuxubha umzimba womntwana - iindlela eziphambili zokuxilisa iintsana - kufuneka zenziwe ngokukhawuleza kwaye ziqaphele ngokunyakaza kwezandla kunye neminwe. Oku kuya kuthintela umonakalo kwesikhumba esibucayi somntwana.
Ukuze uhlaziye izandla kunye neenyawo zentsana, kufuneka uzibophe kancane, uziphucule izihlunu. Ukugoba ngokugqithisileyo kwaye ungaguquli izitho zomntwana akunconywanga, kuba esemncinci, akazange ahlakulele ngokugcwele isisu kunye nesisundu somzimba, kwaye amanxeba kunye nemigqa eguquguqukayo. Ngokuhamba ngokukhawuleza kweemisipha kunye nomlenze womntwana unokulula, okukhokelela entlungu ebuhlungu kunye nesiphumo esingathandekiyo: ukuphuhliswa kwenkqubo ye-musculoskelet yomntwana kuya kuphazamiseka. Ukunyuka kwe-stroking of the handles of the child should be made from hand to joint shoulder. Imilenze yomntwana iyaxutywa ukusuka phezulu, ukuqala kwinqanaba. Ekuqaleni, ukuhlalisa umzimba, ngaphandle kokugubha kunye nokuxubha umzimba womzimba womntwana, kufuneka udibanise ukuzivocavoca. Ukongezelela kwendoda kunye nokwandiswa kweengalo, ingaba yiminyango yeminwe ye-masseur ecaleni komgca womntwana okanye ukunyanzelisa umntwana ngokugxininiswa kwemilenze yakhe ezandleni zomasseur. Ngokugxininiswa phantsi kwemilenze, nokuba umntwana oneminyaka emithathu ubudala uya kuzama ukunyuka kuye. Ngexesha elifanayo, wenza ukuhamba kunye nomzimba wonke, kuba kwinkqubo yokugxeka imisipha yemilenze, izandla zithatha inxaxheba, kwaye umntwana uzama ukuphakamisa intloko.
Simele siqaphele ukuba i-massage ayibangeli umntwana ubuhlungu, mhlawumbi uya kukwenqaba ukuqhubeka kule nkqubo. Ukuzihlaziya kufuneka kuhlaziye kwaye kukhulule umntwana, ukuze amkholise. Xa umntwana uneminyaka engama-4-5 ubudala, ukunyakaza okunyanzelekileyo komntwana kufuneka kube nzima ngokulula ngokuzibandakanya ngokuzilolonga, ngenxa yokuba loo nto umntwana sele ekwazi ukubeka intloko ngokuzimeleyo, kwaye abanye bahlala kwaye badibanise. Ingane inako ukuthabatha iindawo zokudlala kunye nezinye izinto ezinikwe zona. Ngoku ukunyuka komntwana xa wenza umzimba wokuzivocavoca kunye nokucoca umzimba kufuneka kujoliswe ekuphuhliseni nasekuhlanganiseni ezo zakhono. Ukuhlambalalisa iintsana kufuneka kufake iindlela kunye neendlela eziqinisa nokuphucula izihlunu, amaqumrhu kunye nesistim se-back, ingalo nemilenze. Nazi ezinye zazo.
Ukutshatyalaliswa kwezandla zomntwana
Beka umntwana emhlane wakhe. Ngesandla esinye, bamba ipeni yakhe kwindawo yombhobho, kwaye enye iqhube imivimbo emihlanu ukuya kwisixhenxe, iqala ngokusuka kwisandla somntwana ize iphele kwindawo yomda.
Ukusikwa kweenyawo kubantwana abancinci
Beka umntwana emhlane wakhe. Ngesandla esinye, uthathe unyawo lwakhe endaweni ye-ankle, kunye nomnye ukuba enze imivimbo, ehamba ukusuka enyaweni ukuya endaweni ye-groin.
Ukubuyisela umlenze womntwana
Beka umntwana kwisisu sakho. Umva wezandla zombini ukuphazamisa umntwana, uqala emacaleni kwaye ugqibe intshukumo ephezulu. Ukuxilisa kungasetyenziselwa iintsana kunye neentsana. Xa le nqubo isenziwa, umntwana uya kuphakamisa intloko, aphumle kunye nezibambo phezu kombhede. Oku kuya kunceda ekuqiniseni umqolo wakhe kuphela, kodwa kunye nezihlunu kunye nezihlunu entanyeni, iintloko nezandla. Nawuphi na umsebenzi wokuzilolonga osebenzayo okanye osebenzayo, uphumelele ngokuphuhlisa uphuhliso jikelele kunye nempilo yengane. Ziba negalelo ekusebenzeni ngokuqhelekileyo kwazo zonke iziko kunye neenkqubo zomntwana, ukuphuhliswa kwezakhono zombane wengane. Umntwana ukhula eselula kwaye enempilo. Kwixesha eliza kutshatyalaliswa, oko kukuthi, kwixesha elide ukuya kwiinyanga ezintathu ukuya kwezine, ukuzivocavoca umzimba akuhambelani. Zijoliswe ngokukodwa kwiingcamango ezingenakuncedwa zentsana. Kwiinyanga ezintathu ukuya kwezine umntwana uyakwazi ukwenza ezinye izinto ezilula. Yingakho ngeli xesha lokukhula komntwana ngexesha lokuzivocavoca umzimba kunye nokucofa kuyimfuneko yokongeza imisebenzi esebenzayo. Ezi ziyakwazi ukuqhuba ukuhamba, ukuguquguquka kunye nokwandisa iingalo nemilenze yentsana, emva, isebenzisa izixhobo zokukhwela kunye nokubamba amathoyizi nabanye. Amathoyizi kule meko kungcono ukusebenzisa izikhanyiso ezikhanyayo, ukuze inkwenkwe ibabone ebusweni bombhede kwaye iyakuthatha okanye ihambe. Xa uneminyaka eyi-6 okanye iinyanga ezisixhenxe umntwana angakwazi ukukhahlela. Ngeli xesha, ukuqeqeshwa ngokomzimba kufuneka kube ngokubanzi kwaye kuhloswe ekuphuhliseni nasekuqiniseni amaqela ahlukeneyo emisipha kunye namalungu, izitho zomntwana. Kule minyaka, ukwenza umthambo wokuzivocavoca kunye nomntwana okanye ukwenza i-massage, kufuneka uxoxe naye, ekubeni umntwana sele akwazi ukuhlula intetho yabantu abadala kwaye ulandele imiyalelo ethile yabazali.
Ukuthetha nomntwana kuya kufaka isandla ekuphuhlisweni kwentetho yakhe. Umntwana unokucetyiswa ukuba athathe ithoyizi, ahlale phantsi okanye aphephe ngaphesheya, ukusuka kwinqanaba ukuya kwisisu nangendlela efanayo. Ezi ntshukumo umntwana ezinyangeni ezintandathu ukuya kwezi-ezisibhozo zingenza ngokwazo okanye ngoncedo oluncinane kumntu omdala. Ngokwenza ukwelula, i-squats nokuguquka, umntwana uvelisa uphuhliso olunzima kunye nokuqinisa umzimba wakhe. Ngokusondeleyo kunyaka, ukuqeqeshwa kwe-gymnastic yomntwana kufuneka kube nzima. Kulo nyaka, umntwana, njengomthetho, angahlala, eme, ahambe, aqhube, kunye nokunye okunjalo. Yingakho ukuzivocavoca umzimba kufuneka kudibanise ezi zakhono. Ukuphumelela kwabo (umzimba), umntwana angakwazi ukuzimela ngokuzimeleyo, okanye ngoncedo lwabantu abadala, i-squat, uthabathe amathoyizi ukusuka kumgangatho okanye uwatshintshe ukusuka kwindawo ukuya endaweni, ukuphakamisa imilenze kunye neengalo, ukugoba i-trunk kwii-angles ezahlukeneyo, ezantsi okanye ukugxotha intloko njalo njalo. I-Gymnastics kulo nyaka kufuneka ibandakanye izivivinyo zokuphuhlisa umsebenzi kunye nokuzimela. Ngoku siyazi indlela yokwenza i-massage ephumayo kwiintsana.
Ukuthintela ukushisa komzimba kumntwana
Ukusetyenziswa kunye nokulimala kokusebenzisa iinki kwiintsana ezisanda kuzalwa
I-Vitamin D yabantwana: inzuzo kunye nengozi
Indlela yokuphatha i-synechia kumantombazana
Uthando luyiphi indima ebomini bomntu?
Uyithanda njani umfana kwaye uyayiqonda - uyayithanda?
Ingeniso eyongezelelweyo: ukuthengiswa kwenethiwekhi
Indlela yokufumana imfundo ephakamileyo nomfundi wangaphandle?
Isobho se-Bonn: ukulungeleka kwehlobo kwintswelo yabantu abacebileyo
Abahlobo abakhulu kakhulu bamantombazana: amaqhumiso amabhinqa, ahlala ehlala kwimoya
I-Recipe yekhekhe e-hepatic
Isitayela seProvence kwisakhiwo sangaphakathi
Ukulahleka okulungileyo kwintombi
Isitolo esikhulu seM Mango eYurophu savulwa eYurophu
Ubulili be-Classic bubukeka, kodwa "buphazamise"
Ingaphakathi kwisitayela saseMoroccan